Inkqubo yakudala yaseJapan yokulungisa iimbiza zeceramic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iinqanawa ezaphukileyo zilungiswe ngobuchule bamandulo baseJapan kusetyenziswa umsonto wegolide
Ukulungisa imbiza ethe yalahlwa ukuyibuyisela kwimo yokuqala apho kungekho monakalo khona, ngaba phantse umsebenzi we-herculean kwaye kufuneka ube nomonde omninzi ukuze uyenze. Okokugqibela abaninzi bayayincama bayiphose emhlabeni ukuyaphula ibe ngamakhulu amaqhekeza.
Kodwa kukho amagcisa athile ane ubuchule obaneleyo kunye nomonde ukujika loo mbiza yaphukileyo ibe ngumsebenzi wobugcisa ngokusebenzisa indlela yakudala yaseJapan esebenzisa ucingo lwegolide ukubuyisela olo dongwe kwimeko emangalisa ngokwenene. Yindlela esetyenziswa nguCharlotte Bailey, umzobi waseBrighton, oguqula ezi nqanawa zibe yinto efanelekileyo ekufundisweni.
Eyona nto imangalisayo kukuba Indlela yakudala yaseJapan esetyenziswa nguBailey Ayisebenzisi iglu ukulungisa ezi zeramikhi, kodwa endaweni yoko iyatywina ngokusebenzisa igolide, isilivere okanye ucingo lweplatinam. Obu buchule buyaziwa nguKintsugi. Indlela yoqobo isebenzisa ezo zinto zintathu, kodwa uCharlotte unamathela kwiindawo ezaphukileyo ezihambelanayo esebenzisa intambo yegolide ebuntsimbi.
Kucacile ukuba inqanawa ayinakusetyenziselwa owona msebenzi wayo uphambili, kodwa inokusetyenziswa njenge yezona zinto zintle kakhulu umntu anganakho kwigumbi lokuhlala, kuba umphumo wokugqibela uyamangalisa ngokwenene ngobuhle bawo.
Inentsingiselo yemvakalelo kwaye enxulumene ngokusondeleyo nokurisayikilisha, kuba oko kubola kukuwa kunokuphinda kubekwe kunye kunye nokhathalelo olwaneleyo, ukuzinikela kunye neenzame zabo bangafuniyo ukuba zilahlekelwe yimilo yokuqala. Indlela yokwakha kwakhona into eyaphukileyo yimikhosi yobomi uqobo okanye kuba yayilixesha layo.
Unolwazi ngakumbi malunga nalo mzobi kwibhlog yakhe apho uya kufumana izindululo zokuyila ukuba yintoni emsa ngaphakathi.
Kwiinyanga ezisixhenxe ezidlulileyo sasinenye umculi we ceramic.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iinqanawa ezaphukileyo zilungiswe ngobuchule bamandulo baseJapan kusetyenziswa umsonto wegolide